Kachasị mma cillil Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwaahịa ahaziri aha ọma sitere na ụbọchị Thailand na-emepụta sichinand
Ihe iche echiche Rayson kpuchie akụkụ ndị a: static na ike siri ike, arụmọrụ ọsọ, akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ ntuziaka na akpaka.
Site na ike R & D siri ike na ike nrụpụta, Rayson ugbu a abụrụla ọkachamara na onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ. Emepụtara ngwaahịa anyị niile gụnyere nnukwu cilliil nke kacha mma sitere na sistemụ nchịkwa na usoro mba ofesi. Kachasị mma crull marges rayson bụ onye nrụpụta zuru oke na onye na-eweta ngwaahịa dị elu na ọrụ otu nkwụsị. Anyị ga-eme ya, dịka oge niile, na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara akwa na ngwaahịa ndị ọzọ kachasị mma na ngwaahịa ndị ọzọ, naanị mee ka anyị mara. A na-ekwe nkwa nke Rayson na-eme ka usoro arụmọrụ dị mma. Nyocha kemịkal, na-acha, ike tensile, wdg. Bụ ụfọdụ ule a na-ahụkarị eme na ngwaahịa a na ihe eji eme ya.